Abavelisi be-Iot Dtu / i-rtu abavelisi-i-china i-Iot Dtu / i-rtu ababoneleli kunye neFektri
Imodyuli yothungelwano loshishino lwe-DTU 4g yemodyuli efakwe ngaphakathi
Isisombululo se-7-mode chipset isisombululo, ukuxhasa isoftware esebenzayo kunye nekiti yesibini yophuhliso, iinkonzo zokwenza ngokwezifiso, ukubonelela ngeenkonzo zenkxaso yobuchwephesha.
Iimowudi ezi-7 ezipheleleyo zedatha yokuhambisa idatha ye-Netcom yedatha ye-4G RTU
Uyilo lwesixokelelwano soqhagamshelo, olulungele ngakumbi usetyenziso lweshishini, inkqubo yenkxaso yeskripthi, nayo inokuqokelela ngokuzenzekelayo idatha kwizixhobo kunye nokudluliselwa okubonakalayo okucacileyo.
I-MDR2284 gprs / 4g imilinganiselo ekude kunye nolawulo lwe-RTU yamashishini angenazingcingo nge-MQTT
Imveliso ye-4G ye-RTU engenazingcingo
I-GPRS / 4G imilinganiselo ekude engenazingcingo kunye netekhnoloji yolawulo
Inkxaso yeModbus master & ikhoboka / Ukuvota / Ingingqi yokubetha kwengcinga / i-telemetry ekude
Imodyuli yonxibelelwano eyakhiweyo kumgangatho wamashishini kunye neCPU ezimeleyo
Inkxaso yeTCP / UDP / ModbusRTU / TCP / HTTP / MQTT
Itekhnoloji yokufumana ngokuchaneka okuphezulu
Ukukhutshwa kwemveliso yokudlulisa umbane
Uyilo kaloliwe olonyusiweyo / eludongeni
Isishwankathelo Iinkcukacha ezikhawulezileyo I-Chipset: Inombolo yeModeli ye-ZTE: I-MDD3421 Isicelo: Ukuhanjiswa kwedatha yecandelo lokuzenzekelayo Igama leBrama: INDLELA YOKUQALA: Imvelaphi: I-Sichuan, China Uhlobo: Umzi mveliso we-4G wenethiwekhi ye-DTU ...
Ukufunyanwa kwesiginali ye-8 yesiginali ye-analog yemizobo yoqwalaselo lweparameter 4G RTU
I-MDR2184 yindlela yokulinganisa ngaphandle kwamacingo kunye ne-terminal yolawulo (i-RTU) esebenzisa i-GPRS / 4G inethiwekhi engenazingcingo ekufumaneni kude i-analog kunye nomqondiso wedijithali kunye nolawulo lokudlulisa.
I-MDR2184 sisisombululo esineendleko-ngaphakathi nesisodwa esine-module ye-GPRS / 4G yemizi-mveliso kunye neprosesa ebethelelwe, eqonda ukufunyanwa kwedatha yentsimi / ukuhanjiswa kwedatha engenacingo / ukulawulwa kude.
RS232 / RS485 uthotho lezibuko ukuya kwi-LTE engenantambo yokuhanjiswa kwebala okuhanjiswa kwe-4G DTU
Uyilo lwesakhiwo sokwakhiwa kweentambo kulunge ngakumbi kwimeko yemizi-mveliso, ixhasa inkqubo yokubhala, iyayiqonda ingqokelela yedatha esebenzayo kwaye inendlela ezimbini zokudlulisela ngokucacileyo.
I-MDDR3411 ixhasa uthungelwano lwesizwe lwe-2/3 / 4G, ibonelela nge-RS232 / 485 inethiwekhi yokudlulisela ebonakalayo, ukutshintsha oku-2, iziphumo zokudlulisa ezi-2, umbane omnye wemveliso ye-4V, eyakhelwe-ngaphakathi kwi-modbus RTU protocol, ixhasa ngokupheleleyo izicelo zoqwalaselo lweshishini, iNkxaso ye-TCP / UDP kunye nezinye iinkqubo zonxibelelwano zenethiwekhi, le mveliso isetyenziswe ngokubanzi kumanqanaba amaninzi okulinganisa amashishini kunye nolawulo.
Ikhonkco lonxibelelwano olungenacingo nb iot i-DTU yedatha yedatha yedatha yokuhambisa idatha
Protocol yeNkxaso yeCAP, China Telecom Cloud, NB-IoT,
I-LPWAN, ixhasa unikezelo lwamandla ebhetri yangaphandle
I-MDN311 NB-IoT DTU sisiphelo esingaphandle esisekwe kwi-NB-IoT yokuhambisa idatha ngaphandle kwamacingo, ivolumu encinci, ukuxhasa ujongano oluninzi; xhasa i-intanethi, i-IDLE, inqanaba lePSM, fumana amandla asezantsi okulinda; Inkxaso yenethiwekhi ye-UDP / CoAP, ukubonelela ngemowudi yokuhambisa idatha esekuhleni ngokupheleleyo kubasebenzisi; Ipakethi yokubetha kwentliziyo eyenziwe ngokwezifiso, ipakethe yokubhalisa, i-header; Xhasa i-IoT Cloud yethu yokuzakhela ngaphandle kokwakha iseva ngabasebenzisi; Ukuxhasa ngokupheleleyo i-SCADA yamashishini, abasebenzisi akufuneki bakhathalele umthetho olandelwayo wenethiwekhi, ngokuhambisa nje okucacileyo okupheleleyo ungafezekisa ukuthumela kunye nokufumana idatha ngaphandle kwamacingo, ukwenza isixhobo sakho sixhumane kwi-Intanethi ngaphandle komda wexesha okanye indawo.